बलिउडमा हंगामा : सलमान र करणको फिल्म ब’हिष्कार अभियान गर्ने अभियान शुरु ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/बलिउडमा हंगामा : सलमान र करणको फिल्म ब’हिष्कार अभियान गर्ने अभियान शुरु !
काठमाडौँ। सुशान्त सिंह राजपूतको मृ’त्युपछि सोसल मिडियामा नातावादको विषयमा बहस सुरु भएको छ । सुशान्तका प्रशंसक मात्रै होइन, फिल्मी उद्योगका थुप्रैले इनसाइडर–आउटसाइडरको मु’द्दा उठाएका छन् । यसै बहसबीच करण जोहर र सलमान खानसहित ठूलो निर्माण कम्पनी सुशान्तका प्रशंसकको निशानामा परेका छन् । प्रशंसकका अनुसार नातावाद र पक्षपातका कारण सुशान्तले फिल्मी क्षेत्रमा काम पाउन कम भएको थियो ।
‘होइन, तपाईं एउटा वंश विशेष, क्षेत्र विशेष र निश्चित थर भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । तबमात्र तपाईं टिक्न सक्नुहुन्छ । नभए तपाईं त सधैं आउटसाइडर नै हुनुहुनेछ । सुशान्तलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सताइयो र बे’इज्जत गरियो । करण जोहर, आलियो र कपूर परिवारका स्कूल छोडेकाहरु विपरित उनी एक समझदार, बुद्धिजिवि र पढेलेखेका व्यक्ति थिए,’ उक्त अनलाइन याचिकामा लेखिएको छ । सुशान्तले आइतबार आ’त्मह’त्या गरे । उनी विगत ६ महिनादेखि डि’प्रेशनसँग जु’धिरहेको बताइन्छ ।
अस्पतालले उपचार गर्न नमाने पछि एक नेपालिको न्युयोर्कमा कोरोनाको कारण कोठामै मृ त्यु…